Taariikhda Halyeyga bootinta dheer Cabdulle Nuur Waasuge – Africa Sports Network
Taariikhda Halyeyga bootinta dheer Cabdulle Nuur Waasuge
Mar 08, 2016 FAAQIDAADA CAYAARAHA 0 2479 Views By Tajuddin
Abdulle Nur Wasuge
Cabdulle Nuur Waasuge waxa uu ku dhashey magaalada Beledweyne ee Xarunta gobolka Hiiraan ee bartamaha Soomaaliya sanadkii 1941-kii, yaraantiisii wuxuu jeclaa guud ahaan ciyaaraha gaar ahaan Kubadda Koleyga, Laliska iyo Ciyaaraha Fudud.
Wuxuu ku soo caan baxey fagaarayaasha waa weyn ee Gobolka Hiiraan. Sanadkii 1962kii wuxuu ku biirey Ciidankii Xoogga Dalka Soomaaliyeed, isagoo ka gaarey Darajada Colonel.
1963kii wuxuu ku biirey Xulka Qaranka Ciyaartooyda Ciyaaraha Fudud, wuxuu ka qeyb galey ciyaaro fara badan oo lagu qabtey dalka gudihiisa iyo dibaddiisa, wuxuuna ka soo hooyey guulo iyo bilado fara badan.
Waasuge wuxuu gaarey heer uu jabiyey record-kii xagga boodada sare ee Afrika u yaaley. Sidoo kale Waasuge wuxuu ciyaaraha boodada sare ka gaarey heerkii ugu sareeysay oo cid ka daba dhufan karta la waayay, waxaana sabab u ahaa isagoo helay tababare u dhashey dalkii Midowga Sofiyeeti oo siiyay tababar heer Caalami ah, kaasi oo lagu magacaabo Vladmir Alexander.
Cabdulle Nuur Waasuge wuxuu isagoo Xulka Qaranka Soomaaliya metelayay markii ugu horeysay ka qeyb galey ciyaarihii rasmiga ahaa ee lagu qabtey dalka Indonesia sanadkii 1963-kii, taasoo uu ka soo hooyey guulo waa weyn.
Waxaa kaloo uu ka qeybgaley ciyaarihii lagu qabtey Kenya sanadkii 1970-kii, ciyaarahaasoo ay ku kala loolamayeen ciyaartooy ka socotey wadamada Bariga iyo Bartamaha Afrika, wuxuuna ciyaarahaasi ka galey darajada koowaad markii uu ku boodey heerka boodada sare 2.10cm. Wuxuuna markaasi hantey bilad dahab ah
Wuxuu ka qeyb galey mark kale tartan ka dhacey dalka Zambia sanadkii 1971-dii isagoo hantey bilad kale oo dahab ah.
Sanadkii 1972-kii wuxuu ka qeyb galey ciyaaro caalami ah oo lagu qabtey Jarmalka Bari, taasoo uu ku hantey abaal gudkii ugu fiicnaa, isla markaana uu ka soo qaatey Tababar heer caalami ah.
Isla sanadkaas wuxuu ka qeyb galey tartankii lagu qabtey dalkii Midowga Sofiyeeti, gaar ahaan magaalada Oddesa iyo tartankii lagu qabtey isla sanadkaas dalka Tanzania, iyadoo uu halkaasina kala soo laabtay Bilado iyo Lacago.
Sanadkii 1973-kii wuxuu ka qeyb galey ciyaaro lagu qabtey dalka Nigeria, isagoo hantey Bilad Dahab ah, isla sanadkaas wuxuu ka qeyb galey Horyaallada Qaarada Afrika oo lagu qabtey Dalka Senegal, wuxuuna ka galey Heerka Seddexaad.
Isla sanadkaas dabayaaqadiisa wuxuu ka qeyb galey tartan ka dhacayay dalka Mexico, gaar ahaan xarunta Mexico City, halkaasoo uu ku guuleystay kaalinta labaad, isagoo hantey bilad iyo lacag.
Waasuge oo ahaa nin aad iyo aad ugu darnaa ciyaarta Boodada sare iyo Mida hoose ayaa caan ka ahaa Qaaradaha Africa, Asia iyo Latin America, wuxuuna adduunka u dhigey record la yaab leh sanadkii 1973-kii kadib markii uu ku boodey boodada sare 2.13cm, tan hoosana uu boodey 2.18cm.
Cabdulle Nuur Waasuge waxaa lagu tilmaamaa Aabihii Ciyaaraha Fudud ee Soomaaliya.
Halyeygaas Qaran oo difaacay Qaranka,sharafta dalka iyo dadka Soomaaliyeed soo hooyay guulo wax ku ool ahaa oo ilaa maanta laga taariikheeyo .
Bootinta hoose, Bootinta sare, Cabdulle Nuur Waasuge, Cayaaraha fudud
Taariikhda Gudoomiyihii Olombikada Soomaaliyeed Aadan Xaaji Yabarow (Wiish) Abdi Bile Abdi ,former Somali middle distance runner
Abdi Bile Abdi ,former Somali middle distance runner
Abdi Bile Abdi,born 28 December 1962, is a former middle distance runner who holds multiple Somali national records for various...